Maalinta: 2-ka July, 2017
Shiinaha kadib, waxaan nahay dalka labaad ee tababaro badmareennada: Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan ayaa yiri, de waxaan dalkayaga ku leenahay kun badmaax, 180 waa saaxiibo la shaqeeya fasalka sarkaalka firfircoon. [More ...]
Mashruuca Design Sea Sea Design Design ee Bostanlı
Mashruuca Naqshadaynta ee İzmirdeniz-Xeebta ee Bostanlı: Mashruuca naqshadda izzmirdeniz-Xeebta ğı waxaa bilaabay İzmir Magaalo-Weyne si loo kordhiyo soo jiidashada xeebta magaalada, 2 ee Bostanlı. Marxaladda ayaa shaqada timid. Baaskiil aan kala joogsi lahayn iyo jidad lugeynaya oo mara xeebta [More ...]
Maanta taariikhda: 2 July Ururka Shaqaalaha Taageerada 1987
Maanta oo ah Taariikhda 2 Luulyo 1890 Izmit-Adapazari Line (50 km) ayaa la dhammeystirey oo la geliyey adeeg iyada oo lagu xusayo xaflad dowladeed. 2 Luulyo 1987 Shaqaalaha Shaqaalaha Tareenka, ee gudaha 40 [More ...]